होमपेजअमेरिकाअमेरिका गतिविधिअमेरिका विशेषराष्ट्रिय समाचारराजनितीसमाजअर्थखेलकलाविविधबिचारअन्तरवार्तारिपोर्टसाहित्यसमिक्षा तथा समालोचनाकितावनिबन्धडायरीकथागित, गजल, मुक्तकसगरमाथा विषेशसगरमाथा समाचारलेख तथा संस्मरणपर्वतारोही प्रफाईलगीत संगीतगीत सुन्नुहोसप्लेलिष्टमा जानुहोस्अनलाईन रेडियोम्युजिक भिडियोभिडियो प्लेलिष्टफोटो ग्यालरीहाम्रो बारेमा	विविध	विविध
चेतनामूलक गीततिर लागेको छु– मिङमा काठमाडौंको ज्याठामा जन्मे, हुर्केका मिङमा शेर्पा पप गायनमा चर्चित नाम हो । छमछम छमछम पाउजु बजाउँदा, नमुना बनाइदियौ पागल प्रेमीको, आँसु झार्दिन म, जामा जामा जाली रुमाल, खस्यो पानीमा..जस्ता गीतले उनलाई धेरैमाझ चिनायो । स्टेजमा दर्शक तताउन माहिर मानिने शेर्पाले केही रिमिक्स गीतमा समेत स्वर भरेका छन् । स्वर, शासनजस्ता फिल्मका गीतमा समेत गीत गाएका उनी हिजोआज सहयोगमा समेत जुटेका छन् । उनै गायक शेर्पासँग एभरेस्ट टाइम्सका नेत्र मोक्तानले गरेको कुराकानी :
पछिल्लो समय नयाँ गीत बजारमा आएको देखिँदैन नि ?दुई वर्ष जति भयो होला । एल्बमै बनाएर बजारमा नआएको । तर एकदुई गीत त गरिरहेकै छु । फिल्मतिर पनि गाउन थालें । पप गीत मिडियाको प्रमोशनमा पछि परेर पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ । जामा जामा जाली रुमाल, खस्यो पानीमा त हालसालै गाएको गीत हो । यो गीतमा जुन सानीमाको चर्चा गर्नुको कारण ?यो बिल्कुलै शेर्पा समाजको संस्कृति झल्काउने गीत हो । आमाको बहिनी, बुवाको साली, आफ्नो सानीआमा पर्ने साइनो बताउने गीत हो । कुनै किसिमले सानीआमालाई जिस्काउन बनाएको गीत होइन । पुरानो भाकालाई केही थपथाप गरी बनाएको गीत भएकाले यो धेरैले मनपराए । लुक्लातिर पहिलेपहिले साइनो सिकाउने शिक्षामूलक गीत हो यो ।गायनको अर्कै विधा पछ्याउँदै हुनुहुन्छ रे, साँच्चै हो ?केही समय यता म गीत छायांकन गर्ने क्रममा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संगतमा पुगे । उनीहरुको अवस्था देख्दा, कसैले सहयोग नगरेको देखेर मलाई केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो । उनीहरुकै सहयोगका लागि चेतनामूलक गीत बनाउनतिर लागेको छु । यो भन्दैमा पप विधा नै छाडेको चाहिँ होइन ।चेतनामूलक गीत बनाइदिने कम्पनी कसरी पाउनुभयो ?आफैंले कम्पनी खोलेको छु । अरुले यस्तो गीतमा हात हाल्न, प्रमोसन गर्न चाहदैनन् । किनभने व्यापारित गीतहरुको व्यवसाय त डामाडोल छ । चेतनामूलक गीतमा कस्ले साथ देला । त्यसैले नाफारहित काममा आफंै अघि बढेको । गायनमा राम्रै कमाइ भएरै यस्तो आँट गर्नुभएको होला ?गायनको अवस्था कस्तो छ सबैले देखेकै छ नि । देशै यस्तो छ । व्यापारिक अवस्था खत्तम छ । सिडीको बजार छैन । विल्कुलै सहयोगका लागि आफै खट्ने हिसाबले यस्तो कार्यक्रम बनाएको हुँ । मेरो गीत सुनेर हेरेर अभावमा रहेकाहरुले केही राहत पाउलन् कि भन्ने आशामा । सानैदेखिको सपना हो गायन ? सपनै भनांै, सानैदेखि गीत गाउँथे । दिदीले सुनिदिनुहुन्थ्यो । साथ दिनुहुन्थ्यो । दाजुले पनि उत्तिकै साथ दिनुभयो । गीत गाउँदै क्यासेटमा रेकर्ड गर्थें । अनि सुन्थे । निकै मज्जा लाग्थ्यो । स्कुलका कार्यक्रममा पनि गाउने मौका मिल्थ्यो । प्रतिभा देखेरै हो कि, क्लासमा पनि टिचरले गीत गाउन लाउनुहुन्थ्यो । कत्तिको खुसी हुनुहुन्छ, यो पेसा अपनाएकोमा ?एकदमै खुसी छु, दाम त्यति नकमाए पनि नाम कमाएको छु । अमेरिका, युरोपसम्म पुग्न पाए । नेपाल भर घुम्न सके । गीत मनपराउने धेरैले मलाई पनि मन पराउँछन् । अमेरिकामा कति समय रहनुभयो ?गायनमा लागेपछि सबैभन्दा पहिले नै म अमेरिका जान पाएँ । म आफ्नो अहोभाग्य ठान्छु यसलाई । निमा रुम्बा, राजु लामा, सिन्धु मल्ल जस्ता होनहारसँगै भर्खरै गायनमा पाइला टेकेको मिङमा पनि न्युयोर्क, टेक्सास, क्यालिफोर्नियामा मञ्चमा उभिन पायो । अमेरिकी अनुभव ? मलाई धेरैले त अमेरिकै बस्न सुझाएका थिए । तर नेपाल, कलाकार र परिवारको इज्जतकै लागि भए पनि म त्यता बस्न सकिनँ । शेर्पा समुदायको बाहुल्य रहेकाले धेरैले म अमेरिकामै लुक्न सक्ने अड्कल काटेका रहेछन् । केहीले त म न्युयोर्कमै लुक्ने भनी बाजी राखेका रहेछन् सयदेखि हजार डलरसम्म । ग्रिन कार्डमा कत्तिको मन छ ?छैन । किनभने म अब लगभग स्थायी रुपमा बस्न क्यानडा जाँदैछु । गीत संगीतमा भने निरन्तरता नै हुनेछ । प्रतिक्रिया लेख्नुहोस फेरि किन विवाद निम्ताएको ? आइतबार, 17 मार्च 2013 15:50 कुनै पनि घरमा वा संस्थामा अनुशासन भएन भने त्यहाँ सबै थोक भताभुङ्ग हुन्छ। अहिले नेपाली काँग्रेसमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। चाहे त्यो नेपालमा होस् वा त्यो विदेशमा रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीको विदेशमा रहेको भात्री संगठन, जन सम्पर्क समिति कै होस, जताततै प्वालै-प्वाल परेको छ, सायद यो नेतृत्व तह कै नेतृत्व गर्ने क्षमतामा कमी कमजोरी भएर त होइन!केहि महिना अगाडी नेपाली काँग्रेस पार्टीका केन्द्रिय समितिका सदस्य तथा जनसम्पर्क बिभागका प्रमुख अर्जुन जोशीको उपस्थिती तथा जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको खास गरेर न्युयोर्क च्याप्टर विवादित दुवै समूहका बिच एक किसिमको सकारात्मक बार्ता भै, केहि साथीहरूलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन समिति गठन गरि सहमती अनुसार पाँच जनाको निर्वाचन समिति गठन पनि गरेको सुनिएकोमा सबै नेपाली काँग्रेसका सदस्य समर्थक र सुभचिन्तकहरूमा एक किसिमको सकारात्मक संदेश पनि गएको पाइएको थियो तर केहि समय बित्न पाएको छैन फेरि कांग्रेसी साथीहरू बीच मतभेत उत्पन्न हुन थाली सक्यो। अमेरिकामा कांग्रेस मिल्यो भनेको त के हुन्थेयो , त्यो त भ्रम मात्र रहेछ। जन सम्पर्क समिति अमेरिका न्युयोर्क रहनु हुने एक जना सक्रिय सदस्य र बिगतमा च्याप्टरको जिम्मेबारी पद सम्हाली बस्नु भएका सच्चा कार्यकर्ता तथा न्युयोर्क च्याप्टरका पूर्व महासचिब विकास बिस्ट ज्युले लेख्नु भएको लेख मैले डी.सी नेपाल भन्ने वेभ पोर्टलमा पढ्दा मलाई एउटा उखान याद आयो, " १२ वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुंग्रामा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै" सायद दहरो खाले कपालमा लगाउने जेलको खाचो त होइन सिधा हुनका लागि। केहि व्यक्तिहरूलाई सधै समाचारको पात्र बन्न मज्जा लाग्छ होला। विकास बिस्टको प्रस्तुतिमा नेपाली काँग्रेस पार्टीको सच्चा कार्यकर्ता भएको मैले आभास गरे । Â मेरो विचारमा साँच्चै भन्नु पर्दा म एक नारी भएर, न्युयोर्क सहरमा राजनीतिक गर्ने अग्रजहरूले गरेको नारी दिवसको सर्हाना नै गर्नु पर्छ तर विवादमुक्त भै सकेको जनसम्पर्कलाई फेरि बिबादित बनाउने कार्य त्यो पनि जन सम्पर्क समिति अमेरिका न्युयोर्क च्याप्टरको नामको ब्यानरमा दिवस मनाई संस्थालाई विवादित नगर्दा राम्रो हुनेथियो। बुझ्न खोज्दा पनि बुझ्न नसकिने। ५ जना सदस्यलाई सर्बसम्मत निर्णय अनुसार एक-आर्कामा संयोजन गरि कुनै पनि खाले गतिविधि प्रजातान्त्रिक तवरहुनु पर्नेमा, निर्वाचन समितिका १ जना सदस्यले मनोमानी गरि आफ्नै ढंग ले गर्नु कहाँ सम्मको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो ? त्यो सबैले सजिलै बुझ्ने कुरा हो।न्युयोर्कमा यसरी कांगेस फुट्दा के कांग्रेसलाई फाइदा भएको छ त! अवस्य छैन अनि यस बाट हुने असर केहि व्यक्तिहरूलाई मात्र नभई सिंगो काँग्रेसलाई भै रहेको छ। आज काँग्रेसलाई कम्जोर बनाउन काँग्रेस कार्यकर्ता नै लाग्नु कति सम्मको लाज मर्दो कुरा। काँग्रेस फुट्नु नै अरू गैर-कांग्रेसहरूको फाइदा हो भन्ने कुरा यी साथीहरूले कति न नभुझेको हो।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस पछिल्लो परिमार्जन ( मंगलबार, 26 फेव्रुवरी 2013 06:10 ) बजारमा आइपुग्यो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस समाजसेवी मैनालीले अपनाएको वाटो शनिबार, 09 फेव्रुवरी 2013 02:59 गगन बिरही गएको मंसिर १ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दहाललाई थप्पड हान्ने बाग्लुङका पदम कुँवरको नाकको उपचारका लागि न्यूयोर्कमा बस्दै आउनु भएका समाजसेवी अर्जुन प्रसाद मैनालीले पठाउनु भएको १० हजार नेपाली रुपैयाले नेताहरुको सिरक ओड्ने न्युयोर्कका साथीहरु माझ एउटा साँकेतिक सन्दर्भ छोड्नु भएकोछ । अमेरिकी नागरिकहरुका लागि आवश्यक पर्ने रगत प्रवासी नेपालीहरुबाट संकलन गरी रक्तदान अभियान चलाइरहेका मैनालीको सामाजिक प्रशंसनीय सत्कर्मसगै राजनीति चेतनामा गरेको प्रहारको यो बिम्बले मनपरी तन्त्रमा एउटा नागरिकले कसरी सचेत हुनु पर्छ भन्ने कुराको खुलासा गरेको छ। परिवारनै जनयुद्धदेखि माओवादीमा लागेर भोग्नुपरेको पारिवारिक समस्याजन्य मानसिक तनाव तथा अन्तरमनको द्वन्द्व एवं विद्वेषपूर्ण आवेगका कारण घटना भएको' प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेता पनि प्रचण्ड स्वयँले नागरिकको जिम्मा लिन नसक्दा नेताहरुले यस्तै व्यबहार भोग्नु पर्छ भनेर स्वीकारोक्ती जनाउनु भएको छ ।छापिएकै कुरा हो, चर्चामा आएकै कुरा हो- नीतिशास्त्री चाणक्यले छ वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्मको उमेरका बालबच्चालाई सचेत गराउन हप्कीदप्की र थप्पड हान्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।नेपालको गणतन्त्र ल्याउने नेताहरुको बिचार व्यबहार बालककै जस्तो भएको कारणले नेताहरूलाई बारम्बार सचेत गराउन थप्पडको शृङ्खला दोहोरिँदै गएको छ । बास्तवमा अर्जुनजीको बिम्ब भनुं कि साकेतिक भाषा भनुं -कुरा एउटै हो सानो सलाईको काँटीले हजारौं रुखहरु खरानीमा परिणत गर्न सक्छ ।सबै रिसराग, क्रोध, आक्रोशको केन्द्रबिन्दु चाहिँ अहिले पनि सत्ता र दलीय एकताको अभावले गर्दा नै आज मुलुक संवैधानिक तथा राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा रिङ्न बाध्य छ। कसैलाई सत्ता जाने डर त कसैलाई सत्ता नपाउने चिन्ता ? व्यक्तिगत, समूहगत तथा दलगत स्वार्थको भुमरीमा जेलिएका नेताहरू मुलुक र मुलुकवासी भयानक सङ्कटमा पर्न थाल्दा पनि राष्ट्रिय सोच अँगाल्नेतर्फ अग्रसर नदेखिनुले भविष्य अत्यन्तै कष्टकर एवं अकल्पनीय ठहरिन सक्ने शङ्का बढेको छ।आशा गरिएका, भरोसा राखिएका र शिरोपर गरिएका नेताहरू कर्मपरायणताबाट च्युत भई यसरी लज्जाजनक स्थितिमा आउने कल्पनासम्म पनि जनताले गरेका थिएनन् ।आज कान्तिपुरको छातीमा टेकेर पदम कुँवरले मात्र हैंन लाखौं नेपालीहरुले कान्तिपुरको मुटुमा यसरी प्रतिक्रिया ब्यक्त गर्छन् -गरिबिसँग लड्दालड्दा च्यातिएका नङ, उधि्रएका हत्केला र निखि्रएका जाँगरका बाबजुद नेपाली जनता राष्ट्रको सपना फक्राउने अभियानमा होमिएका थिए । तिनै मीठा सपनाहरूको बिस्कुन फिँजाएर जनतालाई मानव ढाल र स्वार्थ प्राप्तिको खुट्किलो बनाएर अहिले सत्ता स्वादनमा लिप्त नेताहरूदेखि जनता विक्षिप्त छन् ।आज देश दुखेका बेला नेताहरू कन्दराका झुपडीमा सल्किएको भोक,शोक,प्यास,असह्य पीडा र वेदनाको ज्वाला हेर्दै निष्काम बसेजस्तो भान भएको छ ।यस्तोमा जनता चरम निराशामा पिल्सिएका छन ।रित्ता काख, खाली सिउँदो र घाइते अंगहरू बोकेर आँसु निखि्रएका आँखामा आफन्तका रेटिएका घाँटी र टुक्राटुक्रा शरीरको सम्झनामा लपेटिएका हजारौँ मनहरू नेताहरूको देशप्रतिको गैरजिम्मेवारी र व्यक्तिगत स्वार्थ देखेर पागलपनको अवस्थामा पुगेका छन् ।जनताका नाममा राजनीति गर्ने, युद्ध गर्ने,विद्रोह गर्ने र सत्तामा पुग्ने तमाम नेताले होसियार हुनैपर्छ। जनताको खबरदारीलाई बेलैमा आत्मसात् गरिनुपर्छ, नत्र वितृष्ण जनताले कुन बेला,के कस्तो विरोधको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने हुन्, ठेगान हुँदैन ।एक मुकाले त यत्रो हल्ली खल्ली मच्चायो भने लाखौं मुक्काको सभावनाले झनै के होला ?सत्ता स्वादन छ,अर्जुनजी ! सुन्दा राम्रो हेर्दा घुमाउरो र चिता आकर्शक बाईरोडको बाटो जस्तै मुक्का हानेका घाइतेलाई तपाँईले दिनु भएको दश हजार रुपौया पनि गतिला मुक्कानै त हो । प्रतिक्रियाहरु (1) पछिल्लो परिमार्जन ( शनिबार, 09 फेव्रुवरी 2013 03:03 ) लोडसेडिङको मारमा एफएम रेडियो । बिहिबार, 07 फेव्रुवरी 2013 03:53 निमा पाखि्रन / न्युयोर्क दिनहुँ नेपालबाट प्रसारित एफएमबाट समाचार सुन्दा थाहा लाग्छ, नेपालमा केहि बर्ष यता हुँदै आएको लोडसेडिङ निरन्तर बढ्दो छ । अहिले दिनको १२ घन्टा पुगेकोछ भने अगामी फागुन-चैत्र सम्ममा १८-२० घन्टासम्म पुग्न सक्ने बताईएको छ । म नेपाल छँदा स्थानीय रेडियो प्रसारणमा लोडसेडिङले पुराएको प्रभावबारे अध्ययन गर्न केहि स्थानमा जाँदा गरिएका अनुभुतिहरु स्मरणयोग्य छन् ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस बजारमा आइपुग्यो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस « शुरुमा अगाडी 1234567 8910 पछाडी अन्त्यमा »	Page2of 10	ताजा समाचार - विविध